Tito 1 NA-TWI - Nkyia - Saa nhoma yi fi Onyankopɔn - Bible Gateway
Timoteo II 4Tito 2
Tito 1 Nkwa Asem (NA-TWI)
1 Saa nhoma yi fi Onyankopɔn somfo ne Yesu Kristo somafo Paulo nkyɛn. Woyii me na wɔsomaa me sɛ memmɛboa nhyɛ nnipa a Onyankopɔn ayi wɔn no gyidi den na menkyerɛkyerɛ wɔn nokwasɛm a yɛn nyamesom 2 a ne nnyinaso gyina nkwa a enni awiei no kyerɛ no so no. Onyankopɔn a onni atoro no hyɛɛ yɛn asetena yi ho bɔ ansa na ɔrefi wiase ase; 3 na bere a ɛsɛ mu, ɔdaa no adi wɔ n’asɛnka no mu. Wɔde eyi hyɛɛ me nsa na migyina Onyankopɔn a ɔyɛ yɛn Agyenkwa hyɛ so da no adi.